Miyey Man City Saf-sharafeed U Samayn Doontaa Real Madrid? Pep Guardiola Ayaa Ka Jawaabay Su’aashan – GOBOLADA.COM
May 3, 2022 May 3, 2022 gobolada_yqp3koLeave a Comment on Miyey Man City Saf-sharafeed U Samayn Doontaa Real Madrid? Pep Guardiola Ayaa Ka Jawaabay Su’aashan
Pep Guardiola ayaa su’aal lama filaan ah kala kulmay wariye reer Spain ah xilli uu ka hadlayay shira jaraa’id ka hor kulanka Real Madrid iyo Manchester City ee Arbacada oo lugta labaad ay habeen dambe ku ciyaari doonaan Santiago Bernabeu.
City ayaa u safartay Spain iyadoo ciyaartii hore ee ka dhacday Etihad Stadium ku badisay 4-3, hase yeeshee waxay ciyaartani kusoo beegantay waqti ay Los Blancos ku sugan tahay xilli farxadeed oo ay 4-0 ku garaacday Espanyol, kuna guuleysatay horyaalka LaLiga.
Intii uu socday shirkii jaraa’id ee ka hor ciyaarta, ayaa su’aal lama filaan ah oo aan meeshaba oollin la weydiiyey Pep Guardiola.
Wariye reer Spain ayaa su’aalay Guardiola haddii ay Manchester City saf-sharafeed u samayn doonto Real Madrid maadaama ay ku guuleysatay horyaalka LaLiga, waxaana uu Guardiola ku jawaabay: “Wax fikir ah kama haysto taas. Waxa aan filayaa in aad i weydiinayso su’aal la xidhiidha horyaalka ay Real Madrid ku guuleysatay.
“Haddii aan noqdo afhayeenka kooxdan, waaban ahay e, waanu u hambalyaynaynaa iyaga, laakiin waxa aanu ciyaaraynaa Champions League, waana tartan ka duwan.”
Real Madrid waxay Axadda la ciyaari doontaa Atletico Madrid oo ay ku booqan doonaan Wanda Metropolitano, hase yeeshee waxay kooxdan ay aadka u xafiiltamaan ku adkaysatay in aanay saf sharafeed u samayn doonin.
Jose Gimenez oo difaaca uga ciyaara Atletico Madrid ayaa yidhi: “Miyaanu saf-sharafeed u samaynaynaa Real Madrid? Waanu u hambalyaynay iyaga, laakiin waxa aanu ixtiraam badan siinaynaa taageereyaashayda.”